Windows 5.4.0 အတွက် DWG FastView ဗားရှင်းအသစ် ထွက်ရှိ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် DWG FastView ဗားရှင်း 5.4.0 ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ ယခုအကြိမ်၏ အပ်ဒိတ်များ- 1. ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထည့်သွင်းထားသည် 2. အသုတ်တင်ပို့ခြင်း PDF ကို ပံ့ပိုးပေးထားသော 3. ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ပုံများကိုဖွင့်ရန် နှစ်ချက်နှိပ်ပါ 4. ဆော့ဖ်ဝဲ၏ ပုံဆွဲဖွင့်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးသည် 5. သိရှိထားသော ချို့ယွင်းချက်များကို ပြင်ဆင်ပါ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပါ။ သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် ဆက်ဖတ်ရန် ...
ယခု PDF ကို DWG သို့ DWG FastView for Mobile ဖြင့် ပြောင်းပါ။
မိုဘိုင်းလ်အတွက် DWG FastView ဗားရှင်းအသစ်တွင် PDF သို့ CAD သို့ပြောင်းခြင်းအတွက် အင်္ဂါရပ်အသစ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဥပမာ Android ကိုယူပါ၊ အောက်ပါဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ- PDF တစ်ခုကိုဖွင့်ပါ၊ အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ တစ်စက္ကန့်စောင့်ပါ။ ဒါပဲ။ My cloud တွင် သင်ပြောင်းထားသော ဖိုင်များအားလုံးကို သင်မြင်နိုင်သည်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က အလကားမဟုတ်ဘူး၊ ဆက်ဖတ်ရန် ...
အမျိုးအစားများပံ့ပိုးမှုအမှတ်အသားများ (Tags)PDF converter
linear dimension ကိုအသုံးပြုနည်းကို ယခုလေ့လာပါ။
ဤသည်မှာ မိုဘိုင်းအတွက် DWG FastView ၏ linear dimension ကိုအသုံးပြုပုံအကြောင်း ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုဖြစ်သည်- ဤအင်္ဂါရပ်ကို နေ့စဉ် 10 မိနစ်အခမဲ့သုံးနိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို လော့ခ်ဖွင့်ပြီး ကြော်ငြာများကို အမြဲဖယ်ရှားလိုပါက၊ သင့်အကောင့်ကို အဆင့်မြှင့်ရန် အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်ပါ-
အမျိုးအစားများပံ့ပိုးမှုအမှတ်အသားများ (Tags)linear အတိုင်းအတာ
အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် အခပေးဝန်ဆောင်မှုအသစ်
လေးစားအပ်ပါသော အသုံးပြုသူများ၊ အကြောင်းအရာတစ်ခု၊ စာသား သို့မဟုတ် အခြားအရာများအပါအဝင် ပုံတစ်ပုံပေါ်တွင် မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို ရွေးချယ်ပြီးနောက်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသည့်အရာကို လုပ်ဆောင်ရန် သင့်အတွက် ရရှိနိုင်သော ညွှန်ကြားချက်အချို့ ရှိပါမည်။ အဲဒါတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရှင်းပြပါရစေ။ စာသားတစ်ခုကို ရွေးပါရစေ- ကျေးဇူးပြု၍ ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ပါ။ ဘယ်ဘက်ကနေ ညာဘက်ကို လိုက်မယ်။ ဆက်ဖတ်ရန် ...
အမျိုးအစားများပံ့ပိုးမှုအမှတ်အသားများ (Tags)ကူးယူပါ, မှန်, ရွှေ့ပါ, လှည့်
Windows 5.3.0 အတွက် DWG FastView ဗားရှင်းအသစ် ထွက်ရှိ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် DWG FastView ဗားရှင်း 5.3.0 ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ ဤအချိန်၏ အပ်ဒိတ်များ- ဂုဏ်သတ္တိများကို ချဲ့ပြီး အဝင်အထွက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ထားသော ပိုကောင်းသော ပိတ်ဆို့ရေတွက်မှု ပုံနှိပ်ခြင်း ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ခြင်း Windows 11 ကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ပြဿနာများကို ကျေးဇူးပြု၍ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းရန် သို့မဟုတ် သင်၏ Windows ကလိုင်းယင့်ထံမှ တိုက်ရိုက်အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ သွားပါ။
DWG FastView ဖြင့် Google Drive/Dropbox တွင် သင့်ပုံများကို ကြည့်ပါ။
လေးစားအပ်ပါသော အသုံးပြုသူများ၊ ဖိုင်များကို နေရာမရွေး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် လူများစွာသည် Dropbox သို့မဟုတ် Google drive ကို အသုံးပြုကြောင်း ကောင်းစွာ သိရှိပါသည်။ ယနေ့တွင် သင်၏ dropbox သို့မဟုတ် Google drive ကို DWG FastView မိုဘိုင်းအက်ပ်ဖြင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်ကို ပြသကြပါစို့။ ထို့နောက် DWG FastView ဖြင့် သင့်ပုံများကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှု တည်းဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ဆက်ဖတ်ရန် ...
အမျိုးအစားများပံ့ပိုးမှုအမှတ်အသားများ (Tags)Dropbox, Google Drive
ပရီမီယံကြေးရယူရန် ဖိတ်ကြားပါ သို့မဟုတ် ပရီမီယံကြေးရယူရန် ဖိတ်ကြားချက်ကို လက်ခံပါ။
လေးစားအပ်ပါသော အသုံးပြုသူများ၊ သင့်အတွက် ပရိုမိုးရှင်း ကမ်ပိန်အသစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ စတင်လိုက်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် DWG FastView ၏ ဘုံအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါက (စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုပါ)၊ လော့ခ်ချထားသည့် အင်္ဂါရပ်များစွာကို သင်ဝင်ရောက်၍မရပါ။ မင်းတစ်လ ဒါမှမဟုတ် တစ်နှစ် စာရင်းသွင်းဖို့ ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုတာ ငါသိတယ်။ အခုက နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုရှိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် သင်ဟာ တစ်ခုပြီးတစ်ခုပါ။ ဆက်ဖတ်ရန် ...
အမျိုးအစားများသတင်းအမှတ်အသားများ (Tags)ဝင်ငွေရဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
🎆🎆🎆 2022 ကျရောက်တော့မယ့် ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်ပါ🧨🧨🧨
လေးစားအပ်ပါသော အသုံးပြုသူများ၊ 2022 ခုနှစ်သည် အနီးဆုံးသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ DWG FastView ကို သင်၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လာမည့်နှစ်တွင် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော CAD ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။ လာမယ့်နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက် ယခုသင် ထပ်လောင်းခံစားနိုင်ပါပြီ။ ဆက်ဖတ်ရန် ...
သင်၏ CAD ပုံတွင် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ဖျက်ရန်၊ ကော်ပီ၊ ရွှေ့ရန်၊ လှည့်ကာ ဓါတ်ပုံရိုက်နည်း။
DWG FastView for Mobile တွင် ပုံဆွဲခြင်းကို သင်ဖွင့်သောအခါ၊ ပုံတွင် မည်သည့်အရာဝတ္တုကိုမဆို နှိပ်ပြီး ဘောက်စ်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကို သင်တွေ့ရပါမည်။ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ဖျက်ရန်၊ မိတ္တူကူးရန်၊ ရွှေ့ရန်၊ လှည့်ခြင်းနှင့် ဖန်သားပြင်လုပ်နည်းကို ကြည့်ရှုရန် အောက်ပါဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။ ဤဝန်ဆောင်မှုများသည် လောလောဆယ်တွင် အခမဲ့ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့ကို ပိတ်လှောင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန် ...
DWG FastView ဖြင့်သင်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ မိုဘိုင်းလ်ဗားရှင်းကိုနမူနာယူပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ ဤအင်္ဂါရပ်ကိုပေးချေသော်လည်းသင်၎င်းကိုနေ့စဉ် ၁၀ မိနစ်အခမဲ့သုံးနိုင်သည်။ အခပေးလုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကိုသော့ဖွင့်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါခလုတ်မှတဆင့် premium account သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကိုနှိပ်ပါ။
အမျိုးအစားများပံ့ပိုးမှုအမှတ်အသားများ (Tags)စာသားကိုရှာပါ, စာသားအစားထိုးပါ